Doorashada Maraykanka - VOA
Monday, May 20, 2013 Wakhtiga Geeska Afrika 06:43
Toos u Dhageyso Idaacadda Subaxnimo Idaacadda Galabnimo Idaacadda Fiidnimo BarnaamijyadaPodcast Maqal iyo Muuqaal Sawirro YouTube Caydaruus Cali-Feer: Anigu ma ihi Al-Shabaab Caydaruus Cabdulle Cali-Feer oo ka mid ah 9 qof oo maxkamadda Federaalka ee Gobalka Minnesota ay xukunno kala duwan ku ridday, ayaa VOA uga waramay danbiga lagu helay iyo sanadaha lagu xukumay. Faahfaahin Minnesota: Haween Argagixisanimo loo Xukumay Xaawo Maxamed Xasan iyo Aamina Cali Faarax oo loo heystay inay xiriir la lahaayeen kooxda Al-Shabaab, ayaa maxkamad ku taalla gobalka Minnesota ay ku kala xukuntay 10 sano iyo 20 sano oo xarig ah. Faahfaahin Obama iyo Erdogan oo ka Wadahadlaya Syria Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, ayaa maanta oo Khamiis ah Aqalka Cad ku soo dhaweynaya ra’iisul-wasaaraha wadanka Turkey Recep Tayyip Erdogan, si ay uga wadaxaajoodaan xaaladda Syria iyo ammaanka gobalka. Faahfaahin Loading...
Obama oo si Caro leh uga Hadlay Fadeexadda IRS Madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay hogaan cusub oo ay yeelato Hay'adda Cashuurta Maraykanka (IRS), ka dib markii lagu eedeeyey inay bartilmaameedsato dad gaar ah. Faahfaahin Minnesota: Somali Kale oo Maxkamadi Xukuntay Maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis ee gobalka Minnesota, ayaa 4 qof oo kale oo Soomaaliya ku xukuntay xukunno xabsi ah, ka dib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen dhalinyaro ka tagtay Minnesota oo ka soo dagaalantay Soomaaliya. Faahfaahin Barnaamijka Ummuuraha Mareykanka Doodii ku saabsaneyd weerarkii lagu qaaday sanadkii hore Qunsuliyadda Mareykanka ee Libya oo soo cusboonaatay Faahfaahin Washington: Shirka Qurba Joogta Mareykanka Magaaladan Washington waxaa shalay ka furmay kulanka qurbta joogta caalamiga ah ee ku nool dalka Mareykanka, kaasoo ay soo qabanqaabisay hay'adda USAID, ayaa waxaa ka qeyb galay qurbo joog Soomaali ah. Faahfaahin Park oo Khudbad u Jeedineysa Congress-ka Madaxweynaha Kuuriyda Koofureed Park Guen-hye, ayaa Arbacadan maanta ah Khudbad ka jeedin doonta kulan ay si wadajir ah u fadhiyaan xubanaha Aqalka Congress-ka ee Mareykanka. Faahfaahin Dab Xoog Badan oo ka Holcaya California Maalintii Khamiista ayey ahayd markii dabkii ugu horeeyey uu ka bilowday deegaan u dhow magaalada Los Angeles, iyada oo uu hadda meelo kalena ka bilowday Faahfaahin Taksiile Soomaali ah oo lagu Weeraray Virginia Maxamed Cabdow Saalim ayaa waxaa weerer aflagaaddo iyo gacanba isugu jira u geystay nin caddaan ah oo rakaab ah oo uu ku soo qaaday Taksi uu waday. Maxamed ayaa ku eedeey ninka inuu Muslim naceyb dartii u weeraray. Faahfaahin Qaraxii Boston oo 3 Qof oo kale Loo Xiray Dowladda Mareykanka ayaa gacanta ku dhigtey sadex nin oo eedeysanayaal ah oo lala xariirniyo inay ku lug-leeyihiin qaraxyadii ka dhacay magaalada Boston, waxaana la horkeenay maxkamad. Faahfaahin Al-Amriki oo Sheegay in la Dhaawacay Cumar Xammami oo loo yaqaan Abu Mansuur Al-Imriki, oo ah Maraykan ka mid ah ajaaniibta ka bar-bar dagaallama Ururka al-Shabab ayaa sheegay in rag ka tirsan Al-Shabaab ay dhaawaceen oo uu ka badbaadey isku-day dil. Faahfaahin Barnaamijka Ummuuraha Islaamka Barnaamijka Ummuuraha Islaamka ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay maxaabiista ku jira xabsiga Guantanamo Bay oo cuntada ka soomay Faahfaahin Booliiska Boston oo Gacanta ku Dhigay Tsarnaev Booliiska Boston ayaa nolol ku soo qabtay midkii haray wiilashii walaalaha ahaa ee ku eedeysnaa qaraxyadii Boston. Dzhokhar Tsarnaev oo 19 jir ah ayaa laga soo qabtay Magaalada Waterfrontla Faahfaahin Falanqeyn: Ragga Lagu Tuhmayo Qaraxa Boston Waxa Xaley la diley mid ka mid ah laba nin oo lagu tuhumey in ay ka dambeeyeen Qaraxyadii Isniintii ka dhaceyOrodkii Maratoonka ee magaalada Boston, Iyadoo kii labaadna uu baxsadey, laakiin lagu daba jiro. Faahfaahin Booliiska Boston oo Weli Raadinaya Tsarnaev Booliiska Boston ayaa sheegay in labadii nin ee lagu tuhmay qaraxii Boston mid la dilay, midka kale oo ay booliisku ku sheegeen magaciisa Dzhokhar Tsarnaev oo 19 jir ahna la baadidoonayo. Faahfaahin FBIda oo sii Deysay Sawirada rag la Tuhunsanyahay FBIda ayaa sii deysay sawirada iyo muuqaalada fiidiyow ee laba nin oo looga shakisanyahay inay ka dambeeyeen qaraxyadii Isniintii ka dhacay Boston Faahfaahin Qarax ka Dhacay Warshad ku Taalla Texas Mas'uuliyiinta Gobalka Texas ayaa sheegay in 5 ilaa 15 qof ay ku dhinteen qarax xalay ka dhacay warshad ku taalla gobalka Texas ee dalka Mareykanka. Faahfaahin Warqad ku Socotey Obama oo laga Shakiyey Sirdoonka dalka Mareykanka ayaa sheegey inay qabteen warqad ku socotey Madaxweyne Barack Obama oo ay ku jireen waxyaabo laga shakiyey. Faahfaahin Warbixinno ku Saabsan Qaraxyadii Boston Qaraxyada ayaa illaa iminka sababay dhimashada 3 qof waxaana ku dhaawacmay 176 qof. Waxaa wali socda baaritaanno lagu ogaanayo cidda ka danbeysa qaraxii shalay. Faahfaahin FBI oo Baaritaan ku Sameysay Guri la Tuhmay Hay'adda Sirdoonka Mareykanka ee FBI ayaa baaritaanno ka sameysay guri ku yaalla duleedka magaalada Boston, kaasi oo lala xiriirinayo qaraxii lagu weeraray Tartankii Orodka Marathon-ka Boston oo ay ku dhinteen 3 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Faahfaahin Falanqeyn: Qaraxii ka Dhacay Magaalada Boston Hay’adaha Amniga ee Maraykanka ayaa wali baaraya ciddii ka danbeysay labadii qarax ee shalay ka dhacay magaalada Boston, waxaana ku dhintay ugu yaraan 3 qof in ka badan 140 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Faahfaahin Barnaamijka Ummuuraha Mareykanka Barnaamijka Ummuuraha Mareykanka waxa uu ku saabsan yahay hanjabaadaha Kuuriyda Woqooyi, iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka John Kerry oo K. Woqooya ugu baaqay inay joojiyaan hanjaabadaha ay ku hayaan nabadda Gobalka. Faahfaahin Dad ku Dhintey Qaraxyo ka Dhacay Boston Saddex qof oo midkood yahay wiil yar oo 8 jir ah ayaa ku dhintay, in kabadan 130 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii laba qarax lala eegtay tartan Marathon oo ka socday magaalada Boston. Faahfaahin Kerry: Caalamku Ma Ogola N. Korea Nuclear Leh Kerry oo uu hareer taagan yahay dhigiisa Kuuriyada Koofureed ayaa sheegay in Kuuriyada Woqooyi aan beesha caalamku marna u ogolaan doonin inay noqoto wadan haysta hubka nuclearka. Faahfaahin Barnaamijka Arrimaha Maraykanka Barnaamijka Arrimaha Maraykanka ee todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay fanaaniin caana oo Mareykan ah oo booqday dalka Cuba oo aan xiriir toos ah la laheyn dalka Mareykanka, iyo xubno ka tirsan Aqalka Congress-ka oo dood ka keenay. Faahfaahin Obama: Waan sii Wadeynaa Cunaqabateynta Somalia Mareykanka ayaa sheegay inuu sii wadayo cunaqabateyntii uu horey ugu soo rogay Somalia, gaar ahaan shaqsiyaad uu u arko inay caqabad ku yihiin nabadda Faahfaahin FBIda oo Abaal Marin Siisay Dhalinyaro Somaliyeed FBIda Mareykanka ayaa Abaal Marin gudoonsiisay Urur ay leeyihiin dhalinyarada Somali-Mareykanka ah oo fadhigiisu yahay gobolka Minnesota Faahfaahin Maraykanka oo u Diyaargaroobay Weerarka Korea Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay filayso in Kuuriyada Waqooyi ay ridi doonto mid ka mid ah gantaaladeeda maalmaha soo socda, isla markaana uu Mareykanku u diyaargaroobayay inuu ka hortago weerar uga yimaada dhinaca Pyyongyoung. Faahfaahin N. Korea: Nuclear Ayaan Ku Weerareynaa USA Kuuriyada Koofureed ayaa xaqiijisay in Kuuriyada Woqooyi ay gantaal dhigtay xeebteeda bari, saacado kadib markii ay Pyongyang sheegtay in la gaaray ogolaanshihii ugu danbeeyey ee ah in nuclear lagu weeraro Mareykanka. Faahfaahin Barnaamijka Umuuraha Mareykanka Barnaamijka Umuuraha Mareykanka ee todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Kuuriyada Koofureed oo isku dhinac ah iyo Kuuriyada Woqooyi. Faahfaahin NBA: Bryant oo Dhaafay Chamberlain Ciyaaryahanka Kubadda Koleyga NBA-da ee naadiga LA Lakers Kobe Bryant, ayaa noqday ciyaaryahankii 4aad ee ugu dhibco dhalin badan ciyaaraha NBA-da Maraykanka, kadib markii uu xalay ka saremaray Xiddigii Walt Chamberlain. Faahfaahin N.Korea oo ku Hanjabtay inay Weerareyso USA Warbaahinta dowladda Kuuriyada Wuqooyi ayaa sheegtay in hogaamiyaha dalka Kim Jong Un uu amar ku bixiyey diyaargarowga weerarro gantaalo ah oo lagu qaado saldhigyada milateri ee gobalka iyo dhulka Maraykanka. Faahfaahin Falanqeyn: Safarka Obama ee Bariga Dhexe Madaxweyne Barack Obama ayaa Soo afjaraya socdaalkiisii ugu horeeyey ee uu ku tago wadanka Israel intii uu madaxweynaha ka ahaa dalkan Mareykanka, iyadoo la filayo inuu dib u soo nooleeyo heshiiskii nabadda ee Falastiin iyo Israel. Faahfaahin Falanqeyn: Booqashada Obama ee Bariga Dhexe Madaxweynaha Mareeykanka Barack Obama oo ku guda jira lugtii 2aad ee booqasho uu ku kala bixinayo gobolka Bariga Dhexe, ayaa tegay magaalada Ramallah ee Daanta galbeed, isagoo la kulmay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Faahfaahin Mareykanka oo u Diyaar Garoobaya Qatar ka soo Wajahda K/waqooyi Mareykanka ayaa ku dhawaaqay qorshooyin uu kaga hortagayo Qatar kasta oo laga yaabo inay ka soo wajahdo xukumadda Kuuriyada Waqooyi Faahfaahin Soomaalida Minnesota oo Madxaf Furaysa Madxaf lagu soo bandhigayo sawirro iyo qalab muujinaya hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliya ayaa laga furayaa magaalada Minneapolis. Cismaan Maxamed Cali oo qorshahan madax u ah ayaa sheegay inuu uruuriyay 700 oo agab ah oo madxafka la dhigi doono. Faahfaahin Shirkadda Youtube oo Is-balaarinaysa Shirkadda Youtube ee internetka ayaa sheegtay inay balaadhinayso hawlihii dhinaca internetka ee ay wadday. Faahfaahin USA: Dhimista Miisaaniyadda oo Bilaabmaysa Maraykanka waxaa maanta (Jimce) ka bilaabmaya dhimista miisaaniyad dhan $85 billion oo si iskeed ah uga go'aysa hay'addo ka tirsan dowladda kadib markii aqalka Senate-ku uu hor-istaagay sharciyo arrintaasi looga baaqsanayo. Faahfaahin John Kerry oo Safarkiisii Ugu Horeeyay Dibadda Ugu Baxay Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa safar 11 maalmood qaadanaya maanta uu uga bilaabmayaa London Faahfaahin Kerry oo ka Digay Dhimista Miisaaniyadda Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in dhimis miisaaniyadeed ee iskeed u hirgasha bisha March ee ay dhaawac weyn u geysan karto Maraykanka. Faahfaahin Shiinaha oo Beeniyay Weerarada Kombiyuutarka Shiinaha ayaa beeniyey warar sheegayey in ciidankoodu ay qaadeen weerarada loogu dhaco xogta kombiyuutarada ee Mareyknka, kuwaasoo ay baahisay koox ilaalisa Ammaanka Kombiyuutarada oo Mareykan ah. Faahfaahin Khudbadda Sannadlaha ee Barack Obama Madaxweynaha Mareykanka ayaa xalay jeediyay khudbadiisii sanadlaha aheyd ee ugu horreysay tan iyo markii dib loo doortay, isagoo kaga hadlay arrimaha gudaha iyo dibedda. Faahfaahin Duufaan Baraf Wadata oo Ku Dhufatay Mareykanka Dabeylo wata qabow daran ayaa ku dhuftay gobolada Waqooyi Bari Mareykanka, iyagoo koronto la'aan dhigay kumanaan kun oo qof sidoo kalena hakiyay duulimaadyo diyaaradaha iyo dhaq dhaqaaqii tareenada. Faahfaahin Dunida oo Soo Dhaweysay Kalka 2aad ee Obama Madaxweyne Barack Obama oo maalintii shalay markii labaad xafiiska loo dhaariyey ayaa caleemasaarkiisa waxaa soo dhaweeyey wadamada caalamka, iyadoo wadanka Shiinuhu uu taxadar ka muujiyey xiriirka Mareykanka. Faahfaahin Madaxweyne Obama oo la Caleemo-saarey Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta meel fagaare ah loogu dhaariyey xilka madaxweynaha isagoo markii labaad hogaamin doona dalka Maraykanka. Faahfaahin Caleema Saarka Madaxweyne Obama Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta lagu caleema saarayaa munaasabad ka dhacaysa aqalka Capitol Hill ee Magaaladan Washington Faahfaahin Madaxweyne Obama oo Xilka loo Dhaariyay Madaxweyne Barack Obama iyo kuxigeenkiisa Joe Biden ayaa maanta xilka loo dhaariyay. Obama ayaa mar labaad barri lagu dhaarin doonaa xafladda caleemosaarka. Faahfaahin Falanqeyn: Xilliga Cusub ee Obama Madaxweyne Barack Obama oo xilli cusub oo afar sano ahi uu u bilaabanayo ayaa la isweydiinayaa waxyaabaha uu culeyska saari doono. Faahfaahin Maraykanka oo Aqoonsaday Dowladda Somalia Mareykanka ayaa markii ugu horeysay muddo 20 sano ka badan si rasmi ah u aqoonsaday dowladda Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqday Hillary Clinton oo la kulantay madaxweyne Xasan Sheekh. Faahfaahin Obama oo Qaabilay Madaxweynaha Somalia Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Aqalka Cad ku qaabilay Madaxweynaha Somalia Xassan Sheekh Maxamud Faahfaahin Maraykanka oo Aqoonsanaya Dawladda Somalia Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka, Johnnie Carson ayaa sheegay in Maraykanku uu si rasmi ah u aqoonsan doono dawladda Somalia Faahfaahin Maraykanka oo Noqonaya dalka ugu Horeeya soo Saarista Batroolka Sanadku markii yahay 2017, waxa lagu wadaa in dalka Maraykanku noqdo dalka kowaad ee soosaarista saliidda cayriin, isaga oo ka horeyn doona Sucuudiga iyo Ruushka Faahfaahin Hillary Clinton oo Isbitaalka ka Laga Saaray Xogahayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa laga saaray Isbitaalka magaalaa New York, halkaasoo maalmo lagu daweynayey ka dib markii dhiigga madaxeedu uu xinjiroobay Faahfaahin Dooddii Miisaaniyadda Maraykanka oo Heshiis laga Gaarey In kasta oo aanu ahayn mid dhameystiran, haddan xubnaha labada xisbi ee Congresska Maraykanka ayaa gaaray heshiis lagaga fogaanayo hoos u dhac dhaqaale. Faahfaahin Hillary Clinton oo Cusbitalka La Dhigay Xoghayaha Arimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Cusbitalka la dhigay, ka dib markii dhiigeeda laga helay Xinjiro ka dhashay jug dhawaan Madaxa kaga dhacday Faahfaahin Obama iyo Madaxda Labada Xisbi oo Kulmaya Madaxeynaha Mareykanka Barack Obama, ayaa maanta oo Jimce ah Aqalka Cad kula kulmi doona hogaamiyayaasha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuquraadiga si xal looga gaaro arrimaha dhaqaalaha. Faahfaahin Maraykanka oo Ciidamo u Diraya Afrika Warbaahinta ayaa qoraysa in Maraykanka uu 4-kun oo ciidan u dirayo 30 waddan oo ku yaalla qaarada Afrika si ay tababar u siiyaan ciidamada waddamada dagaalka kula jira kooxaha argagixisada. Faahfaahin Soomaali la soo Taagay Maxkamad ku taalla New York Saddex dhalinyaro Soomaali ah oo dhawaan lagu xiray Afrika ayaa la soo taagay maxkamad ku taalla New York iyagoo lagu eedeeyay inay tababar la qaadanayeen ururka al-Shabaab. Faahfaahin Connecticut: Obama oo la Hadlay Dadkii laga Dhintay Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa wacad ku maray in awooddiisa oo dhan uu u adeegsan doono sidii ayna dib ugu dhici lahayn musiibadii ka dhacday gobolka Connecticut oo kale. Faahfaahin Connecticut: Magacyada Dadkii Dhintay oo la Shaaciyey Booliiska gobolka ayaa shaaciyey magacayada dadkii ku dhintay weerarkii loo geystay dugsiga hoose ee Sandy Hook ee ku yaalla magaalada Newtown ee gobolka Connecticut Faahfaahin Booliska: Ninka Dilka Geystay Xoog ayuu ku Galay Iskuulka Booliska Maraykanka ayaa sheegay in Adam Lanza oo ah ninkii ka danbeeyay weerarkii ka dhacday Connecticut uu xoog ku galay daarta iskuulka ka hor intuusan toogasho ku dilin 20 caruur ah iyo 6 qof oo waaweyn. Faahfaahin Nin Hubaysan oo Dad u Badan Caruur ku Dilay Iskool Nin hubeysan ayaa toogasho ku dilay ugu yaraan 28 qof oo u badan caruur oo ku sugnaa dugsi hoose oo ku yaalla gobolka Connecticut ee dalkan Maraykanka Faahfaahin Madaxweyne Obama iyo John Boehner oo Kulmay Madaxweyne Obama ayaa Xalay la Kulmay Afhayeenka Aqalka Wakiilada John Boehner, si ay uga wada hadlaan dhaqaalaha Mareykanka ee Gebiga ka lusha Faahfaahin Madaxii Hay'adda CIAda Mareykanka oo is Casilay Madaxii hay’adda sirdoonka Mareykanka, General David Petraeus, ayaa si lama filaan ah isaga casilay jagadaasi. Faahfaahin Obama iyo Qorshihiisa Afarta Sanno ee Soo Socota Madaxweynaha Dalkan Mareykanka Barack Obama oo toddobaadkan dib loo soo doortay ayaa ku mashquulsan dejinta qorshe howleedkiisa afarta sanno ee soo socota Faahfaahin Faallo: Guushii Madaxweyne Barack Obama Taageerayaasha Madaxweyne Obama ayaa farxad iyo dhamaashaad ku jiray ilaa xalay, ka dib markii uu u ku guuleystay xilka Aqalka Cad, afarta sano ee soo socota. Faahfaahin Madaxweyne Obama oo Dib loo Doortay Madaxweyne Barack Hussein Obama ayaa 4 sanno dib loo doortay kaddib uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada Maraykanka. Obama wuxuu helay 303 codadka electoraalka, halka Mitt Romney uu helay 206 codad. Faahfaahin Halkan kala Soco Natiijooyinka Doorashada Gobollada qaarkood ayaa goobaha codbixinta goor dhaweyd la soo xiray waxaa soo baxaya natiijooyinka qaarkood. Halkan kala soco natiijooyinka doorashada. Faahfaahin Doorashadii Maraykanka oo si Rasmi ah u Bilaabatay Muwaadiniinta Maraykanka ayaa maanta isugu soo baxay goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha Maraykanka ee afarta sano ee soo socota xilka haynaya Faahfaahin Dadka Maraykanka oo Madaxweyne Dooranaya Dadweynaha Maraykanka ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooga uga dhiibtaan doorashada madaxtinimada oo ay u tartamayaan madaxweyne Barack Obama oo doonaya in mar labaad la doorto iyo Musharraxa Mitt Romney. Faahfaahin Wendy Sherman oo Booqatay Magaalada Muqdisho Kaaliyaha Xoghaya Arimaha dibadda ee Mareykanka Weddy Sherman ayaa shalay booqatay Magaalada Muqdisho Faahfaahin Faaqidaadda: Soomaalida iyo Doorashada Maraykanka Doorashada Maraykanka ayaa la qabanayaa 6-ba bisha. Haddaba Faaqidaadda ayaa toddobaadkan lagu falanqeynayaa Soomaalida Maraykanka degan sida ayay uga qeybgalayaan dooashada, iyo waliba cidda ay kala taageerayaan labada musharrax? Faahfaahin New York oo ka Soo Kabaneysa Duufaantii Sandy Dhawaq iyo shanqar ay caan ku tahay ayaa dib ugu soo noqday magaalada New York ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan qadadka tareenada iyo basaska dadweynaha. Faahfaahin Obama oo Dib u Bilaabay Ololaha Doorashada Madaxweynaha Maraykanka, Barack Obama ayaa maanta dib u bilaabay ololaha doorashada Maraykanka kaddib markii tan iyo Isniintii uu ku howlanaa duufaantii Sandy ee ku dhufatay bariga Maraykanka. Faahfaahin Dooddii 3aad Obama & Romney Dooddii 2aad ee Obama & Romney Dooddii Biden iyo Ryan Vice Presidential Debate Dooddii Obama iyo Romney AdeegyadaPodcastRRSRukumo WarsidahaMobile